Nandeha manodidina Eoropa ny fiarandalamby dia longstanding fomban-drazana izay tsy handeha maika – Fiaran-dalamby no haingana indrindra, indrindra eco-friendly, ary fomba mahomby indrindra amin'ny fivezivezena amin'ny toerana iray. Na dia rafitra ny lamasinina tapakila maka ny fanaintainana avy nikarakara fiaran-dalamby lavitra, be dia be ny fanaovana drafitra sy ny fiomanana sisa tavela. Mba hanampiana anao manomana ny diany tonga lafatra manodidina Eoropa, eto no toro-hevitra ny ambony mba handeha Eoropa lamasinina.
Mandeha any Eropa amin'ny lamasinina 2020 zava-dehibe ny fandinihana ny làlana alehanao sy ny fotoana laninao amin'ny toerana halehanao tsirairay. raha Amsterdam, Berlin, London, Milan, Paris, ary Venice dia tsy maintsy tanteraka amin'ny lisitra-Jereo ny, mahatakatra ny tena manan-tsaina ny lalana hanaovana izany hitranga. Ataovy lisitra ny toerana tianao ho hita sy afaka izany teny mafy sarintany avy ny diany. Manapa-kevitra amin'ny daty sy ny andro maro no lany isaky ny toerana mba hamita ny lalana faritany haleha izy.
Lahatsoratra zarain'ny Fast Currency Converter App (@currencyconverterapp)
Miresaka amin'ny olona miaraka amin'ny Travel Europe amin'ny lamasinina
Aza adino ny miresaka amin'ny amin'ny an-toerana na ny mpandeha hafa amin'ny fiaran-dalamby dia. Ny vaovao dia hanome anao dia afaka ny ho sarobidy kokoa noho ny na inona na inona ianao hahita amin'ny Travel Guide. Ny miresaka amin'ny hafa, dia mety ho nanoro hevitra ny toerana tsara indrindra mba hihinana, handeha dihy, harena miafina, lehibe hizaha toerana, sy ny fomba tsotra indrindra hahazoana manodidina.
Moa ve ianao mikasa ny Travel Eoropa lamasinina in 2020? Hanomboka amin'ny alalan'ny fitandremana ny hatramin'izao ny tsara indrindra fiarandalamby tapakila manome eo amin'ny Facebook ary Twitter pejy na hitsidika antsika Vonjeo Lamasinina-tserasera fa tsy mety resy lamasinina saran manerana an'i Eoropa
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-tips-travel-europe-train-2018%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)